Nesorin’i Google ny doka YouTube ahitana ny famotopotorana ireo gadra politika Belarosiana · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ireo mpikatroka mpanohitra fa manitsakitsaka ny politikan'ny YouTube ireo dokan-dahatsary
Voadika ny 10 Janoary 2022 4:28 GMT
Sary avy amin'ny StockSnap tao amin'ny Pixabay, Lisansa Pixabay.
Voalaza fa nesorin'ny Google sy ny YouTube ireo doka an-dahatsary mampiady hevitra mampiseho ireo sary fakana am-bavany an'ireo gadra politika Belarosiana nalefan’ny fantsona YouTube Belarosiana mpanohana ny governemanta.
Tamin'ny volana Mey 2021 no nahitan’ireo Belarosiana sy ny mpanao gazety iraisam-pirenena sy mpikatroka voalohany ireo dokambarotra, Namoaka momba ilay zavatra hitany tao amin'ny Twitter i Tadeusz Giczan, Belarosiana mpanao gazety sady mpikaroka:
Zava-misy mampiomehy: efa ho herintaona izao no nampiasain'ny masoivohom-baovaom-panjakana Belarosiana BelTA ny lahatsary takalon'aina tahaka ilay iray ahitana an'i Roman Protasevich ho toy ny dokambarotra handoavam-bola ao amin'ny YouTube misy rohy mankany amin'ny tambajotran'ny fantsona telegrama mpanohana ny governemanta. Nanandrana ny zava-drehetra izahay saingy nilaza ny YouTube fa tsy misy maharatsy izany. pic.twitter.com/suFn3ISdPi
Ahitana ireo mpikamban'ny mpanohitra sy ireo mpanao gazety mahaleo tena nogadrain'ny fitondrana Lukashenka izay toa fiaiken-keloka natao an-tery ireo lahatsary fohy. Nampiasaina mba hampiroboroboana ny fampahalalam-baovao mpomba ny governemanta BelTA sy ny rohy mankany amin'ireo horonan-tsary lava kokoa navoakan'ny Fantsona YouTube ireo doka ireo “Belarosia – firenena ho an'ny fiainana”, mifandray amin'ny tambajotram-panjakana ao amin'ny fantsona Telegram, araka ny filazan’ny fanadihadiana nataon’ny EUvsDisinfo. Anisan'ireo miseho amin'ny dokambarotra an-dahatsary i Raman Pratasevich, mpanao gazety mahaleo tena sady mpitantana ny NEXTA Live fantsona Telegram, sy ny sakaizany Sofia Sapega izay nosamborina taorian'ny nanerena ny fiaramanidina Ryanair hidina an-tany tamin'ny volana Mey 2021.
Nampiasa horonan-tsary fieken-keloka an-tery i Belarosia teo aloha mba hanaratsiana ireo mpanohitra, anisan'izany ny lehiben'ny mpanohitra natao sesitany, Sviatlana Tsikhanouskaya. Tamin'ny volana Aogositra 2020, fotoana fohy taorian'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana ny governemanta tao amin'ny firenena taorian'ny fifidianana feno hosoka, namoaka lahatsarin'i Tsikhanouskaya ny fanjakana milaza amin'ireo mpomba azy mba “tsy hanao vivery ny ainy” sy tsy hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana faobe. Niala tao Belarosia i Tsikhanouskaya fotoana fohy taorian'izay ary nanao fanentanana ho famotsorana ireo gadra politika rehetra.
Nanameloka ny fampiroboroboana ilay horonantsary fieken-keloka an-tery ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona, ary nanamarika ireo mpikatroka fa tsy nanaja ny politikan'ny sehatra Google sy YouTube izy ireo ary nandika ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana manohitra ny fampijaliana ihany koa. Araka ny nolazain’ny sasany tamin'ireo voafonja izay navotsotra taorian'izay, dia nampiasa fampijaliana, herisetra ara-batana ary ara-tsaina ny sampan-draharaham-piarovan'ny fanjakana mba hahazoana ireo fijoroana vavolombelona voarakitra.
Tamin'ny volana Mey 2021, nilaza tamin'ny Rest of World ny mpitondratenin'ny Google fa “nahatsikaritra ny doka roa (manasongadina an'i Pratasevich sy Sapega – GV) ny orinasa ary nandray fepetra araka ny politika mikasika ny votoaty tsy mendrika”. Ny Politikam-pitantanana Dokambarotra YouTube dia mandrara an-kitsirano ny dokambarotra izay “manasongadina olona amin'ny fanararaotana na fanorisorenana; ny votoaty milaza fa tsy nitranga ny zava-nitranga mampalahelo, na mpilalao sarimihetsika ireo niharam-boina na ny fianakaviany, na miray tsikombakomba amin'ny fanafenana ny zava-nitranga”. Mandrara ny kabary fanavakavahana, ny fanararaotana, ny fanorisorenana, ary ny votoaty mampiroborobo ny herisetra, mampidi-doza na fihetsika tsy ara-dalàna ihany koa ny torolalan'ny vondrom-piarahamonina ao amin’ilay sehatra.
Na izany aza, nanomboka nanohy namoaka dokan-dahatsary YouTube mitovitovy amin'izany ny fantsona Belarosiana mpomba ny governemanta izay mirakitra fiaiken-keloka an-tery ataon’ireo gadra politika hafa sy ny propagandy mpomba ny governemanta.
Tamin'ny 21 Desambra 2021, nandefa taratasy misokatra ho an'ny tale jeneralin'ny Google Sundar Pichai ny lehiben'ny mpanohitra Tsikhanouskaya, nisolo tena ny Filankevitry ny Fandrindrana ny mpanohitra sy ny fianakavian'ireo voatazona, nangataka ny Google sy ny YouTube hanaisotra ireo horonantsary manafintohina, hanakana ny fametrahana dokambarotra mitovy amin'izany amin'ny manaraka, ary hametra ny fidirana amin'ny tolotra ho an'ireo tompon'andraikitra tamin'ny votoaty.
Tamin'ny 3 Janoary tamin'ity taona ity, nitatitra i Tikhanovskaya fa nahazo valiny avy amin'i Karan Bhatia, lefitry ny Raharaham-panjakana sy ny Politikam-panjakana ao amin’ny Google.
Taorian’ny taratasiko, nesorin'ny @Google ny dokambarotra misy ny fakàna am-bavany ireo gadra politika. Amin'ny alàlan'ny valin’ny taratasy, voarara izao ny kaonty mitondra ireo doka ireo. Mandika ny Fifanarahan’ny Firenena Mikambana manohitra ny fampijaliana ireo lahatsarin'ny fijoroana vavolombelona an-tery ireo. Misaotra anareo @Google noho ny fanohanana an’i Belarosia. pic.twitter.com/qJITO19o2z
— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) Janoary 3, 2022
Tao anatin’ ilay taratasy, nilaza i Bhatia fa nesorin'i Google ireo doka voasokajy ho “fanitsakitsahana ny politikanay” ary “nametra ny kaonty dokambarotra tompon'andraikitra tsy handefa dokambarotra intsony”. Nohamafisin'ilay sehatra ihany koa fa “tsy hiseho amin'ny” YouTube izay doka vaovao rehetra mifandray amin'ny horonantsary voarara na pejy itodiana.
Araka ny voalazan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Viasna 96, misy olona miisa 968 amin'izao fotoana izao no voasokajy ho gadra politika ao Belarosia, ary mitombo hatrany izany isa izany. Vokatry ny fanenjehana heloka bevava misy antony politika mifandraika amin'ny korontana mitohy taorian'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny hetsi-panoherana faobe tamin'ny volana Aogositra 2020 ny ankamaroan'ireo nogadraina na notanana. Maro amin'ireo no gadra politika malaza, anisan'izany ilay bilaogera sady mpanao gazety Ihar Losik sy Syarhey Tsikhanouski, kandidà ho filoham-pirenena teo aloha sady vadin'i Tsikhanouskaya, izay vao haingana no nahazo sazy an-tranomaizina maharitra.